E-Journal: to my lovely Mom!
ချစ်သမီးရဲ့ ဘဝခရီး လမ်း
သမီးလေးမျက်နှာ သီတာရေစင် လို့
ဘွဲ့တစ်ခုကိုလည်း အပ်နှင်း လို့ပေးခဲ့သေးတယ်။
သမီး အံတုနိုင်အောင် အားပေးခဲ့တယ်။
အဆိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်၊ အရှုံးတွေကို ဆင်နွှဲ
ရပါရစေ မာတာမိခင် မွေးမေမေ။…..။
Rhyme (10:45 PM)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Rhyme at 5:01 PM
မိခင်မေတ္တာကို ရိုးရိုးလေး ဖွဲ့ထားတာပါ--
မေမေ့ ကျေးဇူးကို သတိတရ ကဗျာရေးသူ
တွေရဲ့ စိတ်နှလုံးသားဟာ နူးညံ့ကြပါတယ်--
နူးညံ့သိမ်မွေ့သော မေမေ ကဗျာများ
အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာရှင် ဆိုတဲ့ မေတ္တာဘွဲ့ကဗျာလေးကို ဖတ်ရှုခံစားမိတဲ့အခါ ကဗျာရှင်ရဲ့ မိခင်အပေါ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပုံကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာခံစားမိပြီး ကြည်နှုးပီတိဖြစ်မိပါတယ်၊ မိဘမေတ္တာဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ဖွဲ့ဆိုသီကုံးတိုင်း ဘယ်တော့မှ ဆုံးခန်းမတိုင်သလို ဘယ်တော့မှလည်း မရိုးအီနိုင်ပါဘူးဗျာ။
အသီအကုံးအဖွဲ့အနွဲ့နဲ့ ကဗျာလေးရဲ့ရသက ဆွဲဆောင်အားသိပ်ကောင်းလွန်းတော့ အိမ်မက်ရှင်ကိုယ်တိုင် ကဗျာရှင်နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ လိုက်ပါခံစားရပြီး မိဘမေတ္တာကို ပိုပိုပြီး သိမြင်ခံစားလာရပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က မိခင်တိုင်းရဲ့ ထပ်တူညီတဲ့ မေတ္တာကို ပိုပိုပြီးနားလည်သဘောပေါက်လာအောင် ဖွဲ့နွဲ့သီကုံးတဲ့ ကဗျာရှင်ကို အထူးလေးစားဂုဏ်ယူ ပြီး ကျေးဇူးအထူးလည်း တင်နေမိပါကြောင်းခင်ဗျား။
အလုပ်တွေ အရမ်းများတဲ့ကြားကနေ အခုလို ကျွန်တော် နားပူနားဆာလုပ်တာကို မေတ္တာနဲ့ မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
ကဗျာကတော့ အမေကိုလွမ်းတမ်းတနေတာ။ ကိုယ်တိုင်တောင် ဖတ်နေရင်းနဲ့ အမေ့အပေါ် တာဝန်မကျေတာတွေအတွက် ရှက်မိသလိုလိုဗျ။
Rhyme ရေ ကျနော်တို့အားလုံးမှာ ရဲရင့်စေသော၊ ခွန်အားဖြစ်စေသော ထို့ထက် ဇွဲမာန် ပြည့်စေသော စကားလုံး တစ်ခုရှိတယ် အဲဒါ “အမေ” လို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခေါ်ရတဲ့ အရာပါပဲ ။ ကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီး အမေ့ကို လွမ်းသွားပါတယ် ခင်ဗျာ ။
ချစ်သောနှမလေး Rhyme ဟာ မဟာ့မဟာ ကဗျာဆရာဆိုတာ ဒီတစ်ပုဒ်တည်းနဲ့တင် လုံလောက်ပါတယ်
ဒီကဗျာဟာ ရှေ့ ဆုံးကပါ ပါလိမ့်မယ်။
From . . . . To . . . .
Specific & Absolute Values
I really dislike U, MR.
Two Museums and A Diary
Walking, talking (2).